Villa Somalia oo lacag cusub u timid iyo maamullada oo warqado loo diray [AKHRI]
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle [Sawir hore]
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle ayaa mar labaad warqad u diray Wasaaradaha Maaliyadda, ee dowlad-goboboleedyad, taasoo kaga dalbadey inay soo gubiyaan xusaab-celin lacagii la siiyay.
War-Saxaafadeed kasoo baxay Xafiiska Beyle ayaa lagu sheegay in Wasaaradda ay ka codsaday maamul goboleedyada inay soo diraan xisaab xirka lacagtii hore loo siiyay, sidoo kalena soo gudbiyaan dalabkooda lacagta cusub ee deeqda Bangiga Adduunka.
"Waxaan ku faraxsanahay in qeybtii labaad Surge Support-ka uu Bangiga Adduunka soo diray, waxaana dowlad goboleedyada ka codsanaynaa inay soo diraan xiisaab xirka lacagihii hore iyo dalabka lacagta cusub," ayuu yiri Wasiir Beyle.
Wuxuu xaqiijiyay Wasiirka in dowladda Federalka ah ee Soomaaliya soo gartey 5 milyan oo dollarka Mareykanka, oo uu soo diray Bangiga Adduunka, taasoo lagu soo shubey Bangiga dhexe ee dowladda, ee ku yaalla Muqdisho.
Madaxda maamullada qaarkood, oo Axmed Madoobe kamid yahay ayaa shirkii bishii lasoo dhaafay ee Kismayo ku yeesheen Gollaha Iskaashiga dowlad goboleedyada ka sheegay in maamulkiisa Jubbaland aysan jirin wax lacag ah oo uga timid dhanka dowladda dhexe.
Waxyaabaha keenay khilaafka hadda u dhaxeeya dowlad-goboleedyada iyo Villa Somalia ayaa waxaa qeyb ka ah qeybsiga deeqaha dhaqaale ee loogu deeqo Soomaaliya, oo ay saluugsan yihiin maamullada sida dowladda Federaalka u maamusho.
Maamul Goboleedkii ugu horeeyay oo ka jawaabey hadalka Beyle
Soomaliya 25.10.2018. 10:12
Jawaabta ayaa timid kadib markii Beyle uu sheegay in dowladda ay soo gaartey lacag...
Baaritaan lagu sameeyay Wasaarada Maaliyada iyo gobolka Banaadir
Soomaliya 20.11.2018. 09:25
Dowladda Soomaaliya iyo World Bank oo heshiis kala saxiixday
Soomaliya 31.10.2018. 22:53
Wasiirka Maaliyadda Somalia oo war kasoo saarey deymaha dalka lagu leeyahay
Soomaliya 14.01.2019. 00:05
Agaasimihii Xafiiska Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya oo shaqada laga Eryay
Soomaliya 31.03.2019. 14:49
Maareeye oo shaaciyay caqabadaha hor-taagan maalgashiga Soomaaliya
Soomaliya 23.02.2019. 11:08